आहा रारा प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्दै छौं : अध्यक्ष हरिराम गुरुङ - Parichaya.com
By परिचय	 On २१ मंसिर २०७८, मंगलवार १५:१८ 0
हरिराम गुरुङ (सुरज) सहारा क्लब पोखराका अध्यक्ष हुन् । आत्मा साँक्षी राखी मन, बचन र कर्मले सामाजिक सेवा गरौं भन्ने उद्घोषका साथ २३ बर्ष अगाडि स्थापित क्लब अहिले २० औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको तयारीमा जुटिरहेको अध्यक्ष गुरुङले सुनाए । खेलकूद र पर्यटनलाई जोड्दै सामाजिक हितका लागि समेत क्लबले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । हिमश्री फुड्स प्रालिको प्रायोजनमा क्लबले विदेशी क्लबहरु समेत संलग्न गरी क्लबको ब्राण्डकै रुपमा स्थापित आहा रारा प्रतियोगिता गर्दै आएको छ । उक्त क्लब र यसका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर गुरुङसँग रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी :
.सहारा क्लब अहिले के गरिरहेको छ?
मुख्य त हामी अहिले आहा रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेका छौं । माघ ६ देखि १५ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा प्रतियोगिता संचालन हुने छ । अहिले पोखरा रंगशालामा खेल संचालनका लागि एन्फासँग मैदानको अनुमति लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराज बरालको संयोजकत्वमा विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर प्रतियोगितालाई सफल पार्न गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाइएको छ । सूर्यबहादुर केसी स्मृति सहारा फुटबल एकेडेमीको संचालन, अन्य सामाजिक काम र क्बल कार्यालयमा हुने नियमति काम पनि चलि नै रहेका छन् ।
.पछिल्ला दिनमा आहा रारा प्रतियोगितामा दर्शकको संख्यामा न्यूनता देखिंदै छ । प्रतियोगिताको आकर्षण घटेको कि अन्य केही कारण छन्?
मुख्य कारण त कोभिड १९ नै हो । यो रोगका कारण पछिल्ला केही प्रतियोगितामा अघिल्ला बर्षहरुमा जस्तो गरी दर्शक आउन सकेनन् । अब भने कोभिड केही मत्थर भएजस्तो देखिएको छ । सभासम्मेलन गर्ने, घुम्ने र शैक्षिक भ्रमणका कार्यक्रम पनि बढ्न थालेका छन् । त्यसकारण प्रतियोगितामा दर्शक आउन अब कुनै वाधा नहोला, यो पटक राम्रै संख्यामा दर्शक आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । कोभिड बढेन भने प्रतियोगिता भव्य रुपमा सफल हुनेमा हामी आसावादी छौं ।
.सहारा क्लबसँग सम्बन्धित समितिहरु बेलायत, हङकङ र अष्ट्रेलियामा पनि रहेका छन् । समन्वय र सहयोगका काम कसरी अगाडि बढेका छन् ?
सहारा क्लव युके, सहारा क्लब हङकङ र सहारा क्लब अष्ट्रेलियाबाट हामीले राम्रो सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं । ती क्लबका अध्यक्षहरु क्रमशः कुमार गुरुङ, दीपक गुरुङ र राजमान थकाली तथा पदाधिकारीहरुसँग हामी निकट रहेर समन्वय गरिरहेका हुन्छौ । अन्य गतिविधिहरुमा सहयोग पनि हुने गरेको छ । मुख्य त उहाँहरुबाट आर्थिक सहयोग पनि हुने गरेको छ । आहा राराका लागि ट्रफि, मेडल र रेफ्रीहरुका लागि पनि विविध किसिमले सहयोगहरु भएका छन् । यस्ता सहयोग २०५८ मा क्याराभान गोल्डकप संचालन देखि अहिले सम्म निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको छ । एकेडेमी संचालन र अन्य सामाजिक कार्यमा समेत नगद सहयोग प्राप्त हुने गरेका छन् ।
.सहारा एकेडेमी अब सूर्यबहादुर केसी स्मृति सहारा फुटबल एकेडेमीमा परिणत भएको छ, एकेडेमी कसरी संचालन भइरहेको छ?
क्लबले हरेक बर्ष गर्ने प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकमले २०७० सालबाट एकेडेमी संचालन हुँदै आएको हो । पछिल्लो क्रममा भने स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको परिवारले उहाँको सम्झनामा एकेडेमीलाई सहयोग गर्ने सम्झौता क्लबसँग गरेको छ । प्रतियोगिता गरेर सधैं रकम बचत नहुन पनि सक्छ भनेर केसी परिवारबाट सहयोग लिइएको हो । बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ उहाँहरुबाट एकेडेमीका लागि प्राप्त हुने छ । यस्तो सहयोग १० बर्षसम्म निरन्तर गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पोखरा– १७ दोबिल्लामा २६ रोपनीमा फैलिएको एकेडेमीमा अहिले १४ जिल्लाका २४ बालकहरुको तेश्रो ब्याचलाई निशुल्क खाने, बस्ने, पढ्ने र फूटवल सिक्ने लगायतको व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले पनि एकेडेमीमा बार्षिक २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ । बच्चाहरु विरामी भए भने खर्च थपिन पुग्छ । फुटवल समेत खेल्ने भएका कारण सामान्य वालवालिकाभन्दा उनीहरुको आहार अलि महंगो पनि हुने गरेको छ ।
.क्लबले सामाजिक क्षेत्रमा कसरी योगदान दिंदै आएको छ?
सार्वजकि शौचालयको निर्माण, विद्यालयहरुलाई भवन बनाएर र आर्थिक सहयोग गरेर तथा तारजाली उपलब्ध गराएर समेत क्लबले आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा जोड्दै आएको छ । पोखराको बसपार्कमा हामीले स्मार्ट खालको सार्वजनिक शौचालय बनाएका छौं । क्लब, क्लबका अन्य परिवार, विदेश स्थित सहारा क्लबका शाखाहरु र अन्य मनकारी सहयोगीको रकम शौचालय निर्माणका लागि प्राप्त भएको थियो । नगरपालिकाबाट समेत हामीले सहयोग प्राप्त गरेका छौं । अपांग मैत्री समेत रहेको यो शौचालय प्रयोग गरेवापत लिइने सानो शुल्कले संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसैगरी बसपार्कमा संचालित सहारा आधारभूत विद्यालयलाई पनि हामीले बार्षिक ७५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छौं । गोर्खाको गणेश प्राविको भवन बनाइदियौं । कास्कीकै माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा रहेको एक विद्यालयका लागि पनि तारजाली उपलब्ध गराएका छौं ।
.आगामी दिनमा क्लब कसरी अगाडि बढ्छ? केही नयाँ शोच पनि बनाइएको छ कि?
क्लबलाई सामाजिक संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने र एकेडेमीलाई प्रालिका रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने शोच हाम्रो छ । एकेडेमीमा ३० जना जति वालकहरु राखियो भने २० जना विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा छनौट गरी निश्चित रकम लिने र बाँकी १० जना जतिलाई निशुल्क अहिले जसरी नै छात्रवृत्तिमा संलग्न गर्ने कि भन्ने शोच आएको छ । तर फुटवललाई भने निरन्तरता दिइने छ । खेलकूदतिरको कुरा गर्दा संस्थापक अध्यक्ष बसन्त थकाली, पूर्व अध्यक्षहरु विक्रम थकाली, विरभद्र आचार्य र केशव थापाको कार्यकालमा प्रतियोगिताहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका छन् । उहाँहरु सबै स्थापनाकालिन व्यक्तित्वहरु हो । सबैको सहयोग र सुझाव पनि राम्रो छ । देशविदेशबाट र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा अन्य समाजसेवी र खेलप्रेमी र खेलाडीबाट प्राप्त सहयोगका कारण प्रतियोगिताले सफलता प्राप्त गर्दै आएको छ । मिडियाको सहयोग पनि राम्रो रहेको छ । विशेषतः प्रतियोगिताको प्रमुख प्रायोजकको रुपमा रहेको हिमश्री फुड्स प्रालिको सहयोग उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । नगरपालिका, राष्ट्रिय खेलकूल परिषद्, जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिको सहयोग पनि स्मरण गर्न चाहन्छु ।
युटुबमा ‘घामड शेरे’लाई दर्शकले रुचाएपछि दंग स्वस्तिमा
नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो